विराटले पनि तोड्न सक्दैनन् होला धोनीका यी २ कीर्तिमान! - Everest Dainik - News from Nepal
विराटले पनि तोड्न सक्दैनन् होला धोनीका यी २ कीर्तिमान!
काठमाडौं : भारतीय पूर्व कप्तान महेन्द्रसिंह धोनीले १५ अगस्टमा खेल जीवनबाट संन्यास लिए।
विकेटकीपर ब्याट्सम्यानसमेत रहेका धोनीको क्रिकेटर करियर उत्कृष्ट रह्यो। धोनी विश्वको सर्वश्रेष्ठ फिनिसरहरूमा गनिन्छन्। तल्लो क्रममा ब्याटिङ गर्दै उनले भारतीय टीमलाई धेरै पटक जित दिलाएका छन्।
यसबाहेक धोनी विश्वको सर्वश्रेष्ठ कप्तानसमेत हुन्। आफ्नो कप्तानीमा उनले भारतलाई ठूलो सफलता दिएका छन्। उनको नाम क्रिकेट इतिहासका महान् कप्तानको सूचीमा सूचीकृत भएको छ। धोनी एक यस्ता कप्तान हुन्, जसले भारतलाई विश्वकपको उपाधि दिलाए। त्यसपछि उनले पछाडि फर्केर हेर्न परेन र एकपछि अर्को उपलब्धि हासिल गरे।
याे पनि पढ्नुस टी–२० सिरिजः अन्तिम खेलमा ऋषभ पन्तले पाएनन् माैका
धोनीले कप्तानको रूपमा धेरै रेकर्डहरू पनि बनाएका छन्। उनको कप्तानीमा भारतीय टीमले हरेक टूर्नामेन्टमा शानदार प्रदर्शन गरेका थियो। र, टीमले धेरै खेलहरू जित्यो। साथै धोनीको नेतृत्वमा भारतीय टीमले धेरै ठूला प्रतियोगिताहरूसमेत जितेको थियो।
धोनीले कप्तानीको रुपमा बनाएका २ वटा यस्ता रेकर्डहरू छन्, जुन आउँदै गरेको वर्षहरूमा तोड्न गाह्रो छ। आज हामी ती दुई रेकर्डको बारेमा चर्चा गर्दैछौंः
२. टी-२० विश्वकपमा सबैभन्दा बढी ‘कप्तानी’ : २००७ मा जब पहिलो टी–२० विश्वकप दक्षिण अफ्रिकामा आयोजना भयो। भारतीय टीमको कप्तानीको जिम्मेवारी धोनीलाई दिइयो।
याे पनि पढ्नुस धोनीलाई विश्राम, सबै फर्म्याटमा ऋषभ पन्त विकेटकीपर
उनले त्यहाँ गएर भारतीय टीमलाई च्याम्पियन बनाए। त्यसयतादेखि उनी टिमका कप्तान भए। २०१६ टी–२० विश्वकपसम्म धोनीले भारतीय टीमको नेतृत्व गरेका थिए।
धोनीबाहेक अरु कुनै भारतीय खेलाडीले टी–२० विश्वकपमा भारतको नेतृत्व गरेका छैनन्। टी–२० विश्वकप अन्तिम पटक २०१६ मा खेलाइएको थियो र धोनी त्यसबेला कप्तान थिए।
२००७ देखि २०१६ सम्म कूल ६ टी–२० विश्वकप सम्पन्न भए। धोनीले यी सबै टूर्नामेन्टहरूको नेतृत्व गरे। यो एक विश्व कीर्तिमान हो। जुन ब्रेक गर्न एकदम गाह्रो छ।
याे पनि पढ्नुस धोनीले ‘बुलेटप्रूफ ज्याकेट’ र एके–४७ को साथमा गस्ती गर्ने
१. तीन आइसीसी ट्राफी जिताउने विश्वका एक मात्र कप्तान : धोनी एक मात्र कप्तान हुन्, जसले तीनवटा ठूला आईसीसी ट्राफी जितेका थिए।
उनले २००७ को टी–२० विश्वकप, २०११ एकदिवसीय विश्वकप र २०१३ आइसीसी च्याम्पियन्स ट्रफी आफ्नो कप्तानीमा जितेका थिए। साथै, उनको कप्तानीमा भारत पनि आइसीसीको टेस्ट वरीयतामा शीर्ष स्थानमा पुगेको छ।
धोनी विश्वको एकमात्र कप्तान हुन्, जसले यो उपलब्धि हासिल गरेका छन्। आइसीसी च्याम्पियन्स ट्रफी अब खेलाइने छैन। र, त्यसैले यी रेकर्डहरू तोड्दे सम्भावना कम छ।
ट्याग्स: महेन्द्रसिंह धोनी, विराट काेहली